OTU ESI EME KA ỌNỌDỤ NKE &QUOT;IHI ỤRA&QUOT; NA STEAM - STEAM - 2019
Nsonye nke ọnọdụ "Ụra" na Steam
Site n'enyemaka nke statuses na Steam, ị nwere ike ịgwa ndị enyi gị ihe ị na-eme ugbu a. Dịka ọmụmaatụ, mgbe igwu egwu, ndị enyi gị ga-ahụ na ị bụ "n'ịntanetị." Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịrụ ọrụ na ịchọrọ ka a dọpụ uche gị, ị nwere ike ịrịọ ka ị ghara imekpa gị ahụ. Nke a dị mfe, n'ihi na n'ụzọ dị otú a, ndị enyi gị ga-amata mgbe a ga-akpọtụrụ gị.
Na Steam, ị nwere ike ịnweta ụdị statuses ndị a:
"Ọ chọrọ ịgbanwe";
"Achọrọ igwu egwu";
Ma enwere ihe ozo - "Ihi ụra," nke na adighi na ndepụta. N'isiokwu a anyị ga-akọwa otú ị ga-esi tinye akaụntụ gị na ọnọdụ ụra.
Otu esi eme ka ọnọdụ nke "ihi ụra" na Steam
I nweghị ike ịkọwa akaụntụ n'ime nrọ n'aka: mgbe nkwusiri Steam dị na 02/14/2013, ndị mmepe ewepụwo nhọrọ iji tinye ọnọdụ "Ụra". Mana ị nwere ike chọpụta na ndị enyi gị na-akpali "ụra", ma na ndepụta nke statuses dị gị, ọ dịghị ihe dị otú ahụ.
Kedu ka ha si eme ya? Dị mfe - ha anaghị eme ihe ọ bụla. Eziokwu bụ na akaụntụ gị n'onwe gị na-abanye n'ọnọdụ ụra mgbe kọmputa gị zuru ike ruo oge (ihe dịka awa atọ). Ozugbo ị laghachiri ọrụ na kọmputa, akaụntụ gị ga - abụ "Online". Ya mere, iji chọpụta ma ị nọ na-ehi ụra ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike iji enyemaka nke ndị enyi.
Iji chịkọta: ọnọdụ nke "ụra" onye ọrụ ahụ na-egosi naanị mgbe kọmputa anaghị arụ ọrụ ruo oge ụfọdụ, ọ nweghịkwa ohere ịtọọ ọnọdụ a, biko chere.